‘सहनशीला’ प्रेमको अर्थ अनि भावलाई गहिराइबाट बुझ्नेहरुको कथा हो | Indrenionline.com
सहनशीला सबैको कथा हो पत्रकार सविन प्रियासन उपन्यासकारकारुपमा पनि परिचित छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा केन्द्रीय स्तरमै राम्रो हैसियत बनाएका प्रियासनले पाँच वटा उपन्यास प्रकाशित गरिसकेका छन् । उनले एउटा कथा संग्रह र एउटा सम्पादकीयको संग्रह पनि प्रकाशित गरेका छन् । प्रियासनको पछिल्लो प्रकाशन सहनशीला उपन्यास हो । जसलाई ब्रदर बुक्स प्रालि काठमाडौल् बजारमा ल्याएको छ । प्रस्तुत छ उपन्यास प्रकाशित हुनासाथ साहित्यीक क्षेत्रमा यसले अत्यधिक चर्चा कमाएपछि यसका लेखक सविन प्रियासनसँग हामीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षप ।
सहनशीला उपन्यास कसको कथा हो ?
संघर्ष गर्न नथाक्ने, दुःख–कष्टसँग पैठेजोरी गर्दै जिन्दगी आबाद बनाउने, गल्ती कमजोरी गरेपछि महसुस गर्ने, प्रेमको अर्थ अनि भावलाई गहिराईबाट बुझ्नेहरुको कथा हो सहनशीला उपन्यास ।
सहनशीलाले मुख्य के सन्देश दिन खोजेको छ ?
सहनशीलाले मानिसलाई सकारात्मक चेतसहित अगाडि बढ्नुपर्छ, कहिल्यै निराशाको भुमरीमा पिल्सनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सहनशीला उपन्यासको कथा वस्तुको कुरा गरिरहँदा यसमा फरक तरिकाको प्रेम प्रसँग पनि उठाइएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ?
समाजमा धेरै अप्रत्यासित घटनाहरु छन्, जसलाई हामीले स्विकारि रहेका छौं । सहनशीला उपन्यास विशेष गरी घरपरिवारको कथा हो । स–साना कुराहरुका कारण पनि सधैभरी साथ रहन्छु भन्ने कसम खाने जीवनसाथीहरु बीच कसरी दरार आउँछ । त्यसपछि मानिस शितलताको खोजीमा भौतारिन्छ । तर जहाँ गएपनि घर भनेको घर हो । चाहिने जीवनसाथी नै हो, चाहे त्यो केटाको लागि होस्, चाहे केटीको लागि । यस्तैयस्तै परिवेश भित्र अगाडी बढेको छ सहनशीला ।
सहनशीला उपन्यास कसरी तयार भयो ?
म धेरैजसो समाजमा घटेका घटनाहरुकै बारेमा लेख्ने गर्छु । सहनशीला उपन्यास पनि समाजमा घटि रहेका घटनाहरुमा अधारित छ । केही काल्पनिक कुराहरु पनि छन् । व्यक्ति किटाएर यही मान्छेको कथा हो भनि नहालौं । जिन्दगीको यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा केही भोगाई अनि केही कल्पनाशीलतालाई जोडेर सहनशीला उपन्यास तयार भएको हो ।
हा हा (हाँस्दै) होइन, होइन, यो सबैको कथा हो । यसैको हो भनेर भनि नहालौ । यस्ता घटनाहरु पाइलै पिच्छे हुने गर्दछन् ।
धेरैवर्ष पछि साहित्यमा फर्कनु भयो । तर फर्किएपछि वर्षमा दुईतीन वटा उपन्यास निकाल्न थाल्नु भयो नि ?
हो यहाँले भने झै मेरो साहित्यमा पुनरागमन भएको हो । पुनरागमन उपन्यास लिएर साहित्यमा फर्किएको थिए । अहिले पल्लवी हुँदै सहनशीला उपन्यास निकालेको छु । अब लगत्तै सेल्फी उपन्यास पनि निकाल्ने तयारीमा छु ।
नायीका नम्रता श्रेष्ठको बारेमा लेखिएको नोभेल नम्रता अहिलेसम्म बजारमा आएन नि ?
अब कुन उपन्यास निकाल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ ?
अब लगत्तै सेल्फी त्यसपछि पल्लवी भाग दुई निकाल्ने तयारीमा छु ।
सेल्फी भन्नाले कस्तो विषय वस्तु छ यसमा ?
तपाई पत्रकारितामा पनि अत्यन्त क्रियाशिल हुनुहुन्छ , कतिबेला साहित्य सिर्जना गर्न भ्याउनु हुन्छ ?
सबै भन्दा ठूलो कुरा समय व्यवस्थापन हो । पत्रकारिता मेरो पेशा हो । साहित्य मेरो रुची । त्यसैले दुबै कुरालाई साथसाथै अगाडि बढाएको छु ।
पुस्तकहरु निस्कन्छन्, तर पाठक भेटिदैनन् । यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
सहनशीला उपन्यास विमोचन भएकै केही दिनमा यसले राम्रो बजार लिएको छ । सहनशीला उपन्यास राम्रो भएर हो कि, प्रकाशक संस्था वा तपाईको व्यक्तित्वका कारण हो ?
उपन्यास राम्रो नराम्रो छुट्याउने काम पाठक हो । जहाँसम्म बजारमा आएको केही दिनमै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ भन्ने कुराको पछाडि सबै कुराले काम गरेको छ । जसले गर्दा त्यति बिक्री हुनु स्वाभाविक छ ।
Previous: प्रदेश नं. ३ मा एमाले संसदीय दलको नेता डोरमणि पौडेल
Next: चार वर्षअघि हराएका बालक फेला परेपछि……